Sɛnea Abɔfo Betumi Aboa Wo
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mauritian Creole Maya Mbunda Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zulu
Abɔfo anokwafo ani gye nea nnipa yɛ ho paa, na wɔboa ma Yehowa apɛde yɛ hɔ. Bere a Onyankopɔn bɔɔ asase no, abɔfo “boom too ahurusi dwom, na Onyankopɔn mma nyinaa bɔɔ ose.” (Hiob 38:4, 7) Nkɔmhyɛ a ɛma yehu nea daakye ebesisi wɔ asase so no, efi teteete nyinaa abɔfo pɛ “sɛ wɔpɛɛpɛe” mu.—1 Petro 1:11, 12.
Bible ma yehu sɛ, ɛtɔ mmere bi a abɔfo bɔ Onyankopɔn nkurɔfo ho ban sɛnea ɛbɛyɛ a Onyankopɔn apɛde bɛyɛ hɔ. (Dwom 34:7) Nhwɛso ahorow bi ni:
Bere a Yehowa sɛe Sodom ne Gomora no, abɔfo boaa Lot ne n’abusua ma woguanee.—Genesis 19:1, 15-26.
Tete Babilon nso, bere a wɔtow Hebrifo mmerante mmiɛnsa guu fononoo a ogya wom mu no, Onyankopɔn ‘somaa ne bɔfo ma okoyii ne nkoa’ no.—Daniel 3:19-28.
Wɔde ɔtreneeni Daniel too gyata amoa mu. Ade kyee no ɔkyerɛkyerɛɛ mu sɛ, Onyankopɔn “asoma ne bɔfo ma wabemuamua agyata no ano,” enti hwee anyɛ no.—Daniel 6:16, 22.
Efi teteete na abɔfo aboa nnipa anokwafo
ABƆFO BOAA KRISTOFO ASAFO A NA EDI KAN NO
Ɛtɔ mmere bi a, na Onyankopɔn abɔfo de wɔn ho gye Kristofo asafo a wodi kan no nsɛm mu, sɛnea ɛbɛyɛ a Yehowa apɛde bɛyɛ hɔ. Yɛnhwɛ nhwɛso ahorow bi:
Ɔbɔfo bi buee afiase apon, na ɔka kyerɛɛ asomafo a wɔda afiase hɔ no sɛ wɔnkɔ asɔrefie hɔ nkɔka asɛmpa no.—Asomafo Nnwuma 5:17-21.
Ɔbɔfo bi maa ɔsɛmpakafo Filipo ahyɛde sɛ ɔnkɔ sare kwan a efi Yerusalem kɔ Gasa no so, na ɔnkɔka asɛmpa no nkyerɛ Etiopiani bi a na wɔakɔsom wɔ Yerusalem reba.—Asomafo Nnwuma 8:26-33.
Onyankopɔn bere a wahyɛ sɛ wɔn a wɔnyɛ Yudafo betumi abɛyɛ Kristofo no soe. Enti ɔbɔfo bi yii ne ho adi wɔ anisoadehu mu kyerɛɛ Romafo sraani panyin Kornelio, na ɔka kyerɛɛ no sɛ ɔnto nsa mfrɛ ɔsomafo Petro mmra ne fie.—Asomafo Nnwuma 10:3-5.
Bere a wɔde ɔsomafo Petro too afiase no, ɔbɔfo bi yii ne ho adi kyerɛɛ no na oyii no fii afiase.—Asomafo Nnwuma 12:1-11.
Adanse biara nni hɔ sɛ ɛnnɛ Onyankopɔn nam abɔfo so boa nkurɔfo wɔ anwonwakwan so sɛnea na ɛte wɔ Bible mmere mu no. Nanso Yesu kaa yɛn bere yi ho asɛm sɛ: “Wɔbɛka ahenni ho asɛmpa yi wɔ asase so nyinaa de adi amanaman nyinaa adanse; ɛno ansa na awiei no bɛba.” (Mateo 24:14) Wunim sɛ abɔfo reboa Kristo asuafo no wɔ asɛmpaka adwuma no mu anaa?
Abɔfo boa ma yɛka asɛmpa no wɔ asase so nyinaa
Bible mu nhoma a ɛne Adiyisɛm no ma yehu sɛ abɔfo bɛboa nnipa a wɔwɔ asase so nyinaa ma wɔasua Yehowa Nyankopɔn ne nea enti a ɔbɔɔ asase ne nnipa no ho ade. Ɔsomafo Yohane kyerɛwee sɛ: “Mihuu ɔbɔfo foforo a ɔnam wim a okura daa asɛmpa sɛ anigyesɛm a ɔrekɔka akyerɛ wɔn a wɔte asase so, aman ne mmusuakuw ne kasa ne nkurɔfo nyinaa, na ɔteɛɛm sɛ: ‘Munsuro Onyankopɔn na monhyɛ no anuonyam, efisɛ n’atemmu dɔn adu, enti monsom Nea ɔyɛɛ ɔsoro ne asase ne ɛpo ne nsuti no.’” (Adiyisɛm 14:6, 7) Ɛnnɛ, yɛwɔ osuahu pii a ɛkyerɛ sɛ abɔfo reboa Ahenni ho asɛmpaka adwuma a wɔyɛ wɔ wiase nyinaa no. Anokwa, sɛ ɔdebɔneyɛfo baako mpo sakra na ɔsan ba Yehowa nkyɛn a, “anigye ba Onyankopɔn abɔfo mu.”—Luka 15:10.
Sɛ asɛmpaka adwuma no ba awiei a, dɛn na ebesi? Abɔfo “asafodɔm a wɔwɔ ɔsoro no” bɛboa Yesu Kristo a ɔyɛ ahene mu Hene no ma wɔako wɔ Harmagedon, “ade nyinaa so Tumfoɔ Nyankopɔn da kɛse no mu ko no.” (Adiyisɛm 16:14-16; 19:14-16) Sɛ Awurade Yesu bu atɛn na ‘ɔde aweredi ba wɔn a wontie yɛn Awurade Yesu ho asɛmpa no so’ a, abɔfo a wɔwɔ tumi bɛka ne ho ama wɔasɛe nnebɔneyɛfo.—2 Tesalonikafo 1:7, 8.
Enti nya awerɛhyem sɛ abɔfo no dwen wo ho paa. Wɔn a wɔpɛ sɛ wɔsom Onyankopɔn no, abɔfo no pɛ sɛ esi wɔn yiye. Afei nso, Yehowa nam abɔfo so abɔ ne nkurɔfo ho ban ahyɛ wɔn den.—Hebrifo 1:14.
Ɛnde, yɛn mu biara wɔ gyinae titiriw bi a ɛsɛ sɛ osi. Asɛmpa a wɔreka wɔ wiase nyinaa no, yebetie na yɛadi so anaa? Yehowa Adansefo a wɔwɔ baabi a wote no ani begye sɛ wɔbɛboa wo ama woanya Onyankopɔn abɔfo ahoɔdenfo no so mfaso.
Hwɛ sɛ wubehu sɛ Onyankopɔn tie mpaebɔ nyinaa, anaa sɛnea ɛsɛ sɛ yɛbɔ mpae, ne ade foforo a yebetumi ayɛ ma yɛabɛn Onyankopɔn.
Ɛdɛn na Bible ma yehu fa Yehowa, Yesu, ne abɔfo anokwafo no hɔ?
Ɛho Hia sɛ Wode Wo Ho Hyɛ Ɔsom Pɔtee Bi Mu Anaa?
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN No. 5 2017 | Abɔfo​—Wɔwɔ Hɔ Ampa? Nea Enti a Ɛfa Yɛn Ho
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN No. 5 2017 | Abɔfo​—Wɔwɔ Hɔ Ampa? Nea Enti a Ɛfa Yɛn Ho